Kali kali ma tihid, Kaniisada Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
Dadku waxay ka baqayaan inay keli ahaadaan - shucuur ahaan iyo jir ahaanba. Xadhiga keli ee xabsiyada ayaa sidaas darteed loo arkaa mid ka mid ah ciqaabta ugu xun. Cilmi-nafsi-yaqaannada ayaa sheegaya in cabsida keli ahaanta ay dadka ku keento ammaan darro, welwel, iyo niyad-jab.
Ilaaha Aabbaha ah wuu ogaa tan sidaas darteedna wuxuu ku celceliyay dadka inuusan keligood ahayn. Wuu la jiray iyaga (Ishacyaah 43,1: 3), wuu caawiyey (Ishacyaah 41,10) isna wuu ka tegi lahaa iyada (Bilowgii 5:31,6). Farriintu way cadahay: keli kuma nihin.
Si loo muujiyo farriintan, Ilaah wuxuu wiilkiisa Ciise u diray dhulka. Ciise kaliya uma keenin bogsiin iyo badbaado adduun jabtay, laakiin wuxuu ahaa mid inaga mid ah. Isagu wuu fahmay wixii aan soo maraynay maxaa yeelay isagu wuu dhex noolaa (Cibraaniyada 4,15). Farriintu way cadahay: keli kuma nihin.
Markuu wakhtigii Eebbe xaddiday yimid markuu Ciise dhammeeyey shaqadiisii ​​dusheeda ee iskutallaabta dusheeda, Ciise wuxuu rabay inuu xertiisa u sheego inay keli ahaan maayaan xitaa haduu iyaga ka tago (Yooxanaa 14,15-21). Ruuxa Qudduusku wuxuu mar kale u adeegsan doonaa farriintan: keli ma nihin.
Waxaannu ku helnaa Aabaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah sida inagu soo dhoweeyeen oo sidaas ayaan qayb uga noqonay bixinta rabbaaniga ah. Eebbe wuxuu noo xaqiijiyaa inaanan ka baqin inaan keli ahaano. Haddaynu xumaano sababta oo ah waxaan galaynaa furiin ama kala tag, keli kali maahan. Haddii aan dareemno faaruq iyo cidlo sababta oo ah inaan lumin qof jecel, kali kali ma tihid.
Haddii aan dareemno inuu qof walba naga soo horjeedo wararka beenta ah, keli keli kuma nihin. Haddii aan dareemno inaanu qiimo lahayn oo aan waxtar lahayn maxaa yeelay shaqo helitaan ma lihin. Haddii aan dareensan nahay in si khaldan loo fahmay sababta oo ah dadka kale waxay sheegaan inaan u leenahay ujeeddo khaldan hab dhaqankeena, keli kali maahan. Markii aan dareemno daciifnimo iyo kaalmo la'aan sababta oo ah waan jiran nahay, keli kali ma tihid. Haddii aan dareemno inaan ku guuldaraysanahay sababtoo ah waxaan tagnay barar, keli ma nihin. Haddii aan dareemno in culayska adduunku inagu culus yahay, keligeenna ma nihin.
Waxyaabaha adduunkan way inala wareejin karaan, laakiin aabaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ahi had iyo goorba dhinacaynu nahay. Iyagu meesha uma joogaan inay naga saaraan duruufahaheena adag ee naga fog, laakiin inay hubiyaan inaannaan kali ku ahayn, iyadoo aan loo eegin dooxada ay tahay inaan mareyno. Way hagaan, hagaan, fuliyaan, xoojiyaan, fahmaan, raaxaystaan, dhiirrigeliyaan, na tusayaan oo qaadaan tallaabo kasta oo safarkayaga nolosha ah ee ay nala qaataan. Gacmahoodu naga saarayaan nagama tegi doonaan. Ruuxa Quduuska ahi wuu inagu dhex jiraa sidaa darteed waligeen ma lihin inaan dareemno cidlo (1 Korintos 6,19) sababta oo ah: Kaliya ma nihin!